American Airlines hamoaka mpiasa 13,000 raha mbola mijanona ny fiaramanidina
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » American Airlines hamoaka mpiasa 13,000 raha mbola mijanona ny fiaramanidina
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • Tourism • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Manakaiky ny dimy herinandro amin'ny 2021 isika, ary indrisy, sendra toe-javatra mitovy amin'ny 2020 isika
Mpiasa AA 13,000 no azo nalefa tamina fialan-tsasatra tsy voaloa satria ny areti-mandringana dia mandringa amin'ny fitakiana dia an-dranomasina
Mpiasa amerikana no nibolisatra teo amin'ny manodidina ny 19,000 mpiasa tamin'ny Oktobra 2020
Ny famerana ny dia iraisam-pirenena izay mitaky ny hisian'ny fanandramana COVID-19 ratsy dia nampihena ny fangatahana
Ny American Airlines, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana lehibe indrindra dia nanambara fa efa ho 13,000 ny mpiasan'izy ireo no afaka nalefa hiala tsy voaloa taorian'ny faran'ny fihodinana faharoa ho an'ny karama fampiasa ho an'ny mpiasan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amin'ny 1 aprily, raha mihazona ny fiaramanidina.
Ny programa furlough dia hisy fiatraikany amin'ny 4,245 mpikarakara sidina, mpiasan'ny serivisy 3,145, mpanamory fiaramanidina 1,850, mpiasa mpikarakara 1,420, mpiasan'ny serivisy mpandeha 1,205, mpandefa 100 ary mpampianatra 40.
Mpiasa an-tsambo monina any Fort Worth no nibontsina mpiasa manodidina ny 19,000 rehefa tapitra ny volana Oktobra ny fanampiana nataon'ny governemanta amerikana teo aloha. Notsiahivina izy ireo tamin'ny volana Desambra, taorian'ny nanolorana 15 miliara dolara ho an'ny indostria hatramin'ny volana martsa.
"Efa ho dimy herinandro eo ho eo amin'ny 2021 isika, ary indrisy, sendra toe-javatra mitovy amin'ny 2020 isika," American Airlines'Ny CEO CEO Doug Parker sy ny filoha Robert Isom dia nilaza tamin'ny memo ho an'ny mpiasa fiaramanidina.
"Ny vaksininy dia tsy zaraina haingana araka ny ninoantsika rehetra, ary ny famerana ny fivezivezena iraisampirenena izay mitaky mpanjifa hanao fitsapana Covid-19 ratsy dia nampihena ny fangatahana," hoy ilay memo.
Ny governemanta amerikana dia nanokana ny fanolorana fanampiana ara-bola voalohany $ 25 miliara tamin'ny volana martsa lasa teo mba hitazomana ireo mpitatitra tsy hanapaka ny mpiasa hatramin'ny fararano. Ny sendikan'ny seranam-piaramanidina dia voalaza fa manery ny fanampiana karama amerikana $ 15 miliara vaovao hanohanana ny indostria mandritra ny fahavaratra.
United Airlines nandefa fampitandremana toy ny volom-borona toa izany tamin'ny 14,000 tamin'ireo mpiasan'ny zoma lasa teo. Ny Delta Air Lines sy ny Southwest Airlines dia nahavita nanilika ny fandroahana toerana, na izany aza, noho ny fandaharam-potoana fialan-tsasatra an-tsitrapo indrindra. Na dia nanolotra fifanarahana an-tsitrapo hampihenana ny mpiasa aza ny Amerikanina sy i Etazonia tamin'ny taon-dasa, dia mbola voatery nanery ny mpiasa ireo orinasa roa ireo.
India dia mila fampidirana momba ny fizahantany any ambanivohitra, fizahan-tany ara-pahasalamana ...